Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo booqday dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweyne ku xigeenka Puntland oo booqday dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii Gaalkacyo
August 22, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweyne ku xigeenka dowlada Puntland Cabdixakiim Cumar Camay oo booqday dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Sawirka: xafiiska warfaafinta madaxtooyada.
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku xigeenka dowlada Puntland Cabdixakiim Cumar Camay ayaa maanta booqday dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof, oo ay kamidyihiin dad shacab ah iyo saraakiil booliis ah.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa kormeeray xaalada dadka dhaawaca ah kuwaasoo hadda lagu dabiibayo isbitaalka guud ee Gaalkacyo.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa booqashadiisa dadka dhaawaca ah uu ugu tagay waxaa kala qaybgalay dhowr kamid ah golaha wasiirada, guddoomiyaha gobolka Mudug iyo duqa magaalada Gaalkacyo.
Isagoo la hadlayay saxaafada wax yar kadib booqashada, madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa sheegay dadka dhaawacmay kuwaasoo aan dalka lagu daaweyn Karin in loo diri doono daaweyn caafimaad oo dibada ah.
Harare-(Puntland Mirror) Milatariga Zimbabwe ayaa xabsi guri dhigay Madaxweyne Robert Mugabe gudaha caasimada Harare, sida uu sheegay Madaxweyne Jacob Zuma ee Koonfur Afrika. Mugabe ayaa khadka taleefoonka ugu sheegay Zuma in uu fiicanyahay, sida uu [...]